सुर्य ग्रहणबारे खगोल सास्त्री प्राज्ञ डा. ऋषि शाहको बैज्ञानिक धारणा :नाङ्गो आँखाले नहेर्नु (भिडियो) « Postpati – News For All
सुर्य ग्रहणबारे खगोल सास्त्री प्राज्ञ डा. ऋषि शाहको बैज्ञानिक धारणा :नाङ्गो आँखाले नहेर्नु (भिडियो)
पुस ०९, काठमान्डौ । पुस १० गते बिहिबार सुर्य ग्रहण लाग्दै छ । यो कस्तो ग्रहण हो ? ग्रहण लाग्नुको बैज्ञानिक कारण के हो ? यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने बिषयमा खगोल विद तथा प्राज्ञ डा. ऋषि शाहासंग पोष्टपाटी डटकमको यो बिशेष अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस ।
सुर्यमा लाग्ने खण्ड ग्रहण के हो ? यसले कस्तो प्रभाब पार्छ ?
सुर्य ग्रहण एउटा भई राख्ने ‘इभेन्ट’ हो । यस्ता खालका घटनाहरु भैरहेका छन् । ईस्ट्रोनोमीमा यसलाई स्पेसियल टाइफ अफ एक्सिडेन्ट भन्छौ । यसपालीको ग्रहणलाई खण्ड ग्रास वा पार्शियल सोलर इक्लिप्स भनिन्छ । त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, सुर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ र पृथ्वीलाई चन्द्रमाले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ । यहीक्रममा सुर्य, चन्द्र र पृथ्वी एकै लाईनमा हुँदा सोलार सिस्टममा सुर्य ग्रहण देखिन्छ । त्यसैगरी चन्द्रमाको बेला सुर्य ग्रहण देखिने गर्छ ।
खण्ड ग्रासमा पुरा सूर्यलाई ढाक्दैन, सुर्य रिङ्ग जस्तो देखिन्छ, त्यसको कारण पृथ्वी र सुर्यको बिचमा चन्द्रमा आएर बस्छ, त्यसको छायालाई पृथ्वीबाट हेर्दा एउटा रिङ्ग जस्तो देखिन्छ । नेपालबाट हेर्दा खण्ड ग्रास जस्तो देख्न सक्छौ । यो करिव ८ बजेर ४० मिनेट देखि ११ बजेसम्म हुन्छ ।
सूर्य ग्रहणलाग्दा नाङ्गो आँखाले नहेर्नु होला । यसले आँखालाई हानि गर्छन ।
खगोल विज्ञान बारे हामीले जतिनै अनुसन्धान गरेपनि पुग्दैन । खासगरी संसारका धेरै देशहरुबाट खगोल बिधहरुले रिसर्चका लागि यसको फोटोहरु खिच्ने र अबलोकन गर्ने कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् । जुन चाहि हिलियो रिसर्चका लागि यस्ता ग्रहणहरुले हामीलाई सघाउ पुर्याउछ ।
भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस
ग्रहणको प्रकार बारे बताई दिनु हुन्छ कि ?
ग्रहण बारे नबुझेसम्म आश्चार्य जनक जस्तो पनि हुन्थ्यो । पहिले थाहा पनि थिएन । यसको कारण भय डर हुने गर्थ्यो ! सुर्य नहुँदा अँध्यारो हुने र अँध्यारो हुँदा डार्कनेस संग डराउथे । यसकारण यसले कल्चरमा पनि प्रभाब परेको थियो । धर्ममा पनि धेरै कुराहरु आइरहेका छन्, महाभारतमा पनि यस्तो कुराहरु आइरहेका छन्, यी संग सम्बन्धित त हुन्छन तर यो छाया हो । यसलाई साइनटिफिक तवरले हेर्दाखेरी डराउनु पर्ने कुरा छैन । ज्ञान बिज्ञान र अन्धविश्वासका कारण डराउछन, यसले त्यतिधेरै असर गर्दैन तर पुरै खग्रासमा भने दिनमा रात पर्ने कुरा जस्तो हुन्छ । त्यहाँ प्राणिहरुको मनोबलमा फरक प्रभाब पार्छ । जस्तै रात परेको जस्तो हुन्छ र हरेक जिबजन्तुहरु बास बस्ने, आत्तिने जस्तो कुरा हुन्छ । यसले मानबिय साइक्लोजिमा पनि असर पार्छ, भन्ने अनुसन्धान भैरहेको छ । डाइरेक्ट असर पार्ने भन्दा पनि बिश्वासकै कुरा हो ।
तर हामीले एउटा कुरा बिर्सन हुन्न कि ? यो ब्रह्माण्डमा सोलार सिस्टम मुभ भैरहेको छ । हरेक ग्रहहरु मुभिंग भैरहेका छन् । यिनीहरु सिधा एकलाइनमा बस्दैनन् । चन्द्रमाले पृथवीलाई परिक्रममा गर्दा ५ डिग्रीको हाराहारीमा ढल्केर परिक्रमा गर्ने भएकोले हरेक औंसी र पुर्णिमामा ग्रहणहरु देखिदैनन ।
सुर्य ग्रहणलाई हेर्न कुनै उपकरणहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
अबस्य, सुर्य ग्रहण हेर्नलाई सर्टिफाईड ग्लासहरु पाइन्छन । सुर्यको किरण अत्याधिक तेज हुनेहुँदा डाइरेक्ट हेर्न हुदैन । उक्त तेजिलो किरणले आँखाको रेटिना नै ड्यामेज गराउन सक्ने हुँदा हेर्न हुँदैन । इनडाइरेक्ट रुपमा हेर्न सकिन्छ, किट प्रोजेक्ट गरेर हेर्न सकिन्छ । यस्तो प्रोग्राम युनिभर्सिटिहरुमा र प्रतिष्ठानहरुमा प्रयोग भैरहेको हुन्छ । अहिले इन्टरनेट मार्फत पनि लाइभ आउने हुँदा उक्त माध्यामबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
डाक्टर साहेव ! ग्रहणलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने र बुझ्न सक्छौ वा भौतिकबादी दृष्टिकोणले हेर्न र बुझ्न सक्छौ ?
म साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको बिद्यार्थी र देशको प्राज्ञको नाताले हेर्छु, हाम्रो प्रतिष्ठान पनि छन् । त्यहाँबाट अस्ट्रोनोमी (खगोल बिज्ञान)को रिसर्च भैरहेको छ । फिजिक्स मार्फत अस्ट्रोनोमिको अध्यन हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि भैरहेको छ । सुर्यको बारेमा हामीले जतिपनि थाहा पायौ उति बेटर हुन्छ । सबै आकासिय पिण्डहरुको विभिन्न पक्षहरुको हुन्छन, अस्ट्रोनोमिमा बिज्ञान तथा प्रबिधिको जुन सेक्टर पनि त्यसमा अटाइन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरु नासा, युरोपियन स्पेस, मित्र राष्ट्र भारत, चिन, जापानमा धेरै अनुसन्धानहरु भैरहेका छन् । हाम्रो देशमा पनि यसरीनै अनुसन्धान गरिरहेका छौ ।
ग्रहणलाई यो रासिले हेर्नु, यो रासिले नहेर्नु भन्ने कुरा साइकलोजिकल फ्याक्टर पनि हो । त्यसै बिश्वास र अन्धविश्वास भन्ने कुरा थाहा नपाएसम्म भय त्रास जसलाई पनि हुन्छ तर थापा पाएपछि परम्परागत हिसाबले आत्मा सम्मान गर्नु पर्छ । हाम्रो समाज हिन्दु फिलोसोफीबाट आएको हुँदा परम्परागत दृष्टिकोणले केहि आत्मविश्वास हुनेकुरा स्वाभाविक छ तर धेरै अन्धविश्वासी हुन् हुँदैन, यद्यपि अज्ञानी हुनुभन्दा उक्त बिषयलाई अध्यन गरेर जानकारी लिनु राम्रो हो ।
धार्मिक ग्रन्थ अनुसार ग्रहण लागेको बेलामा दिशा पिसाब गर्नु हुन्न, खाना खानु हुन्न, अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न हुँदैन भन्ने बुझाइ छ ! यसबारे तपाई के भन्नु हुन्छ ?
यसमा मैले अघि निबेदन गरे जस्तै, थाहा नपाएसम्म कति कुराहरु थाहा हुँदैनन् । साधारणतया सुर्यसंग हाम्रो लाइभ जोडिएको हुन्छ । ‘सिकार्डियन साइकल’ भन्ने कस्तो हुन्छ भने बेलुका सुर्य अस्ताए पछि मानिसहरु आराम गर्छन, त्यसो हुँदा सुर्य नभएको बेला काम गर्दा स्वास्थ्यगत हिसाबले लाभ नहुन सक्ला तर त्यसको पुस्ट्याइ चाहि भएको छैन । सुर्य ग्रहण लाग्दा सबै बिग्रन्छ, नासिन्छ भन्ने नहोला तर सतर्क रहनुस भनेर संकेत गरेको पनि हुनसक्छ । खासगरी सूर्यलाई ग्रहणले ढाक्यो भने जनावर तथा जीव जन्तुको ब्यबहारमा भने भिन्नता आउछ । उनीहरुले राति भयो भनेर महसुस गर्ने कुरा र सुत्न जानेकुरा, अनि पुन: उज्यालो भएपछी एक्टिभ हुने कुराले उनीहरुको मानसिकतामा प्रभाब पार्न सक्छ ।
खग्रास ग्रहण बारे, केहि बताई दिनुस न ? खग्रास लागेको दिनको कुनै स्मरण छ ?
छन । खग्रासको इतिहासमा मेरो लाइफमा नेपाल बाटै दुइ-तिन पटक देखेको छु । पछिल्लो खग्रास झन्डै ८० प्रतिशत ढाकेको थियो । त्यो खग्रास एसियाबाट देखाउनको लागि नासाबाट लाइभ ट्रान्समिसन पनि गरेको थिए । त्यो बेला महसुस भएको थियो कि दिन रात परेको जस्तो, चिसो भएको जस्तो महसुस भएको थियो । पुरा अँध्यारो त हुँदैन तैपनि मानिसहरुमा दिनमै रात परेको महसुस हुन्छ ।
खगोल शास्त्र के हो ? आम मानिसले यसलाई कसरि बुझ्न सक्छन ?
यो ब्रह्माण्डमा रहेका मानव जिबन, सुर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी र अन्य पिण्ड र ग्रहहरु छन्, यो एउटा आश्चर्यजनक क्रियसन हो । कसैले भन्छ भगवानले गर्यो । कसैले भन्छ एभ्युलेसन भयो । हाम्रो लाइफ पनि कहाँबाट आयो ? कताबाट जान्छ ? भन्ने कुराको ठुलो रहस्य छ । सुर्यको सिदान्त अनुसार यसको आयु ४.५ बिलियन भएको साइन्सले बताएइ रहेको छ । त्यसपछि के हुन्छ ? मनुस्य कहाँ जान्छ ? र पृथ्वीमा मानव जिबनको कसरि उत्पति भयो र अन्य पिण्ड वा ग्रहमा किन भएन ? सुर्य नभए के हुन्छ ? यस्तै बिषयलाई तिब्र गतिमा अनुसन्धान भैरहेको छ । यो नै खगोल अध्यन हो ।
अब अन्त्यमा ग्रहण लाग्दा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भए बताई दिनुसन डाक्टर साहेब ?
ग्रहण लागेको बेला नाङ्गो आँखाले नहेर्नुहोला । हेर्यो भने आँखा बिग्रन सक्छ । हेर्दा इनडाइरेक्ट रुपमा वा कुनै प्रोजेक्टको सहायतामा हेर्नु होला । इन्टरनेट लाइभ मार्फत हेर्न सक्नु हुन्छ । धन्याबाद ।
९ पुष २०७६, बुधबार को दिन प्रकाशित
#डा. ऋषि शाह